पत्रकारिता कि पर्चाकारिता ? – तर्क शास्त्र
सामान्यतया अनलाइनमा प्रेस विज्ञप्ति राख्नुको उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै माझ सूचना प्रवाह गर्नु हो । तर यदि एकै विषयका त्यही सूचनालाई भिन्दा भिन्दै तरिकाले राखिन्छ भने त्यसको अर्थ के हुनसक्छ ? कुरा हो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सोसल साइन्स वहा:को ‘अनियमितताको नाममा’ आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको ।
गत आइतबार एकै विषयमा शब्दहरुको घटबढ गरी जारी गरिएको छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको प्रेस विज्ञप्तिले यसको गरिमामा स्वत: प्रश्न गरेको छ । यसरी दुईवटा विज्ञप्तिमा फरक-फरक शब्द राख्दा तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि विशेषगरी कसैलाई बदनाम गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
सामान्यतया सरकारी निकायको प्रेस विज्ञप्ति भनेको औपचारिक डकुमेन्ट हो तर वेबसाइटमा एक खालको र फेसबुक पेजमा चाहिं अर्को खालको शब्दको प्रयोग गरि लेखिएकोले सत्य-तथ्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि सूचनालाई अतिरन्जित बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । यसको उद्देश्य के हुनसक्छ त ?
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको शब्दहरुमा एकरुपता हुनुपर्ने हो तर अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने एकै संस्थाको नाम कतै ‘एलायन्स फर सोसल डाइलग’ त कतै ‘एलाइन्स फर सोसल डालइग’ लेखिएको छ । पढ्दै गर्दा यो एकै संस्थाको नाम हो कि अर्को कुनै हो भन्नेमा द्विधा सिर्जना हुन्छ । यसले शब्दहरुको क्वालिटी घटाएको छ जसले गर्दा सरकारी निकायको डकुमेन्टहरुमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।
यहाँ त अख्तियार मात्र होइन राज्यको चौथो अंग मानिने संचार माध्यमहरुले पनि गलत सूचना प्रवाह गरेको कुरा प्रष्टै देखिन्छ । अख्तियारको फेसबुकमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमामात्रै समाचार बनाउँदा प्राय: सबै संचार माध्यमहरुमा सोसल साइन्स वहा:को कार्यकारीणी समितिमा रहेका एक सदस्यको नाम ‘निर्मल ज्ञवाली’ लेखिएको छ तर यदि सोसल साइन्स वहा:को वेबसाईटमा हेर्ने हो भने सोसल साइन्स वहा:का कार्यकारीणी समितिमा निर्मल ज्ञवाली नामका व्यक्ति नै छैन । फेसबुकमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा समाचार बनाएका प्राय: सबै मिडियाहरुले आफ्नो खबरमा दिपक ज्ञवालीलाई निर्मल ज्ञवाली नै लेखेको पाइन्छ । यति कुराको क्रस चेक त सो संस्थाको वेबसाइट हेरेरै पनि गर्नसकिन्थ्यो तर समाचार बनाउनेहरुले त्यो गर्नु आवश्यक ठानेनन् सायद ।
सूचना प्रवाह गर्नु हरेक संचार माध्यमको दायित्व हो तर सत्य-तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यमहरुले यसरी प्रेस विज्ञप्तिकै मात्र भर परेर गलत सूचना प्रवाह गर्नु कतिको उचित होला ? कसैको प्रेस विज्ञप्तिको हुबहु लिड मात्र परिवर्तन गरेर समाचार बनाउनु मात्र न्युज मिडियाको काम हो त ? अरुले दिएको सूचनाको गेटकिपिंग र क्रस चेक गर्न यसरी नै चुकेको भएर होला सायद नेपाली संचार माध्यमहरुको विश्वसनीयता घट्दै गएको ।
म पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको नाताले मैले बुझेको स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको सन्तुलित समाचार दिनु हो । यसको लागि दुवै पक्षको कुरा राख्नुपर्छ । तर यहाँ सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि समाचारहरुमा आरोपित पक्षको कुरा राखिएको छैन । सायद दुईतर्फि नभएर होला योसँग सम्बन्धित कति समाचारहरुलाई विश्लेषण गर्दा यो समाचार संचार माध्यम आफैले बनाएकोभन्दा पनि कसैले बनाईदिएको जस्तो देखिन्छ । यो अनियमितताको बारेमा संचार माध्यमहरु आफै सत्य-तथ्य खोज्नभन्दा पनि तथ्यहीन र सनसनीपूर्ण समाचार बनाउनमा मात्रै सिमित भएको जस्तो देखिन्छ ।
पत्रकारीताको कक्षामा मैले बुझेको कुरा प्रेस विज्ञप्ति आफैमा पूर्ण समाचार होइन । विज्ञप्ति जसले निकालेको हो यो उसको एकतर्फको मात्र सूचना समेटिएको डकुमेन्ट हो । अब त्यसलाई समाचार कसरी बनाउने त्यो संचार माध्यमको पाटोको कुरा हो । प्रेस विज्ञप्तिमा जे आउँछ त्यही कुरा छाप्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो पत्रकारिता होइन पर्चाकारिता हो । यदि जसले जे दिन्छ त्यही छाप्ने हो भने सायद त्यसलाई विज्ञापन भनिन्छ पत्रकारिताको भाषामा । माथिका यी उदाहरणहरुले सरकारी निकायको आधिकारिक डकुमेन्ट साथै प्रचार र पत्रकारिताको फरकमाथि मेरो मनमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
Blog, ViewsAlliance For Social Dialogue, ASD, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, एलाइन्स फर सोसल डाइलग, नेपाली मिडिया, पत्रकारिता, प्रेस विज्ञप्ति, सोसल साइन्स बहा, CIAA, Nepali Media, Press Release, Social Science Baha
← नाकाबन्दीको वार्षिकीमा सिक्नुपर्ने पाठ
मानव साङ्गलो बेथितिको विरोधमा बोल्ने एक माध्यम →